Nagu saabsan - Yuhuan Zhanfan Makiinado Co., Ltd.
Yuhuan Zhanfan Makiinado Co., Ltd., waa soo saare xirfadle ah oo loogu talagalay qaybaha biraha biraha ee biraha ahama iyo shirkad tiknoolajiyad sare leh oo isku dhafan oo cilmi baaris & nashqadeyn ah, Heer aan caadi aheyn oo loo habeeyay, wax soo saar, iib, iyo adeeg. Waxaa la aasaasay 2002,. oo ku yaal 'MAGAALADA WAALADA' - Aagga Warshadaha ee Yuhuan, Taizhou, gobolka Zhejiang, oo leh gaadiid ku habboon Ningbo iyo Shanghai Port iyo dhammaan dhul weynaha.
Iyada oo ka badan 15years shaqo adag, oo ah xubin ka mid ah ururka mitirka biyaha mitirka Shiinaha, ZHANFAN waxay sumcad wanaagsan ku heshay suuqa Qaranka, waxaana lagu sharfay inay u fidiso adeeg iyo wax soo saar shirkadaha ugu sareeya 10 mitir ee biyaha iyo shirkado kale oo saaxiibtinimo leh. . Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay warshadaha kiimikada, dhowrista biyaha, dhismaha magaalooyinka, kiimikada kiimikada iyo warshadaha kale.
Waxay leedahay aag daboolan oo kudhowaad 7000m2 iyo aag dhisme oo kudhow 17000 m2 oo leh aalado 300 & 200 shaqaale ah.
Waxyaabaha ugu badan ee alaabtu yihiin ahama Cover steel steel water water, Xirxiraha mitirka biyaha birta ahama, Jumladaha mitirka biyaha ee ahama, Noocyada kaladuwan ee birta ahaanta leh, Dareeraha birta ahama, iwm.
Iyada oo leh mashiinada sameynta birta ee saxda ah, xarunta mashiinka otomaatiga ah, CNC lathes, mashiinada lakabyada, mashiinada Passivating, mashiinada qodista otomaatiga ah iyo aalado kale oo badan, sidoo kale qalabka baaritaanka: spectrometer, mashiinka tijaabada siligga iyo tijaabada buufin ee cusbada, iwm, siinta tayada xirfadeed iyo si dhakhso leh u gaarsiinta dhammaan macaamiisha sharafta leh.
ZHANFAN ka dhigi tayada wax soo saarka sida nolosha shirkadda, u hoggaansamaan looga baahan yahay macaamiisha sida xarunta, dhigay nidaamka maamulka iyo soo saar alaabta si adag sida ay heerarka qaranka iyo warshadaha. Ka sokow shahaadada ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001, ZHANFAN waxay heshay dhowr shati oo loogu talagalay mitirka biyaha ee ahama.
Shirkaddu waxay raacdaa fikradda ganacsi ee ah "tayada waxay ka timaaddaa xirfad, xirfad waxay abuurtaa iimaan wanaagsan, iimaan wanaagsan ayaa samaysay sumadda" si kor loogu qaado tartanka shirkadda iyo saamigeeda suuqa. U fidinta adeeg aad u fiican macaamiisha berri ka wanaagsan istiraatiijiyad fiican, faa'iidooyinka calaamadaha, ruuxa macquulnimada iyo alaabteeda tayada wanaagsan.